Yakareruka 8 mavhiri akapfava kabhegi Sutukesi: Mucheka 7302, China Akareruka 8 mavhiri akapfava kabhini Suitcase: Mucheka 7302 Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Phu Ly Bao Co. Ltd
Uri pano: Imba>chigadzirwa>Mucheka maLuggages
Yakareruka 8 mavhiri akapfava kabhini Suitcase: Mucheka 7302
Zipper yekuvhara zvakanaka inopedzisa: yakashongedzwa, yakaverengeka silky nylon yekunze kune goridhe rakarongedzwa zippers. Masango epamukati akasungirirwa zvizere neakadhindwa kusvibisa-mapundu ekudzivirira polyester kumira kushandiswa kwezuva nezuva. Kumashure komisheni kwakazara padheka kubata uye kuchengetedza yako laputopu.
kufambisa kwemazuva ano: Iyi Kenneth Cole YEMAHARA sophie nylon 15. 0-Inch laptop yekumashure inoratidzira akawanda mapikicha maratidziro uye akawanda makomendi kuchengetedza zvese zvako zvekufamba zvakakosha zvakarongeka. Inoratidzira nyore-kubata-kumusoro kubata. Kumashure ekunze kune mesh kumashure mapaneru, trolley tunaki kuti ikwane pamusoro pematanda akawanda akatwasuka trolley inobata nemaoko akasununguka kutakura, uye inogadziriswa, padded mapendekete.
yakarongedzwa macomputer: kumberi gusset kurongeka komisheni inoisa RFID yakadzivirirwa flap pamusoro pekupinda muhomwe, pakareba yakazara-zipper yekupinda muhomwe, penzura, uye yakavhurika yepamusoro pepepa muhomwe. Front main compartment inosanganisira padded piritsi muhomwe, maviri akavhurika mashefu muhomwe, uye kamuri yekubata zvimwe zvinodiwa. Mberi nechemberi kumeso kwechimiro kune chakavanzika zippered stash muhomwe yekuchengetedza nekuchengetedza zvakakosha.
Yakareruka 8 mavhiri akapfava kabhini Suitcase: Mucheka 7301
Phu Ly Bao Co. Ltd (PLB) Chirungu kero: 71 - 73 Street Nha. 1B, Binh Tri Dong B, Binh Tan Dunhu, Ho Chi Minh Guta, Viet Nam
0777 969 228 Levitt (Mr) - 0909350418 Chivabvu (Ms)